Maseru eruzhinji uye tsananguro yezvavari | Ehupfumi Zvemari
Zvese zvinhu zvekambani zvinogona kuiswa mumapoka mumasevhisi, muzvikamu zvinoenderana nehunhu hwemari hwavanogara. Imwe yeiyi zvikamu zvinogovana hunhu zvakafanana dzinogona kuiswa mumapoka akakura emadzitateguru, ayo anonyanya kuve makuru matatu. Aya makuru matatu makuru makuru aripo ndeaya epfuma, ayo ezvikwereti, uye neayo e net net worth.
Muchikamu chino tichaona kuti chikamu chimwe nechimwe chezvikamu izvi chakakamurwa sei. Saka kuve neasset imwe neimwe yakasunganidzwa pamwe chete kunotitungamira kuti tive nekutonga kwakakura mukuziva kuti mari yashandiswa zvakadii, ndeapi mabhenefiti anowanikwa, kana mubhadharo wakamirira.
1 Assets uye yavo Assets
2 Zvikwereti uye maAfa avo
3 Iyo Net Kuenzana
4 Balance Sheet yekutenda kune maAseti
Assets uye yavo Assets
Iyo midziyo inomiririra zvese zviwanikwa nekodzero izvo zvine kambani, zvese zvainazvo. Iyo inotangira kubva kumahofisi fenicha, kune ivhu, mari kana mari mubhangi, marezinesi ekushanda, patent kana michina yemakomputa. Rondedzero yacho ndeyakareba, uye mukati mehupfumi hwakawanda hweaseti iyo yakakamurwa kuita zvikamu zviviri, zvazvino nezvisiri zvemazuva ano.
Yazvino inoshanda: Iyo inonziwo midziyo yazvino, zvinhu zvazvino uno ndeimwe yezvinhu zviviri zviri mukati memidziyo ine zvinhu zvinovimbisa mashandiro ekambani zuva nezuva. Ivo ipfupi, uye nhaka yayo isingasviki gore rimwe. Izvi zviwanikwa zvinofanirwa kudyiwa, kunge zvigadzirwa, kana kutengeswa, sechigadzirwa chekupedzisira. Aya masimendi ari kushanda, uye izvozvi zviwanikwa zvinogona kuiswa muzvikamu zvitatu. Masheya, anooneka uye anowanikwa.
Asina-Razvino Asset: Iyo zvakare inonzi yakamisikidzwa midziyo, isiri-yazvino midziyo iri mukati measeti 'mafaiti iyo ine izvo zvinhu zvinochengetwa mukambani kwenguva inopfuura gore rimwe. Mavari tinogona kuwana zvese zvinhu zvinobvumidza iyo kambani kuchengetedza yayo inobudirira kugona. Hapana hupfumi hwakatarisirwa kuve hwechigarire, uye kutengesa kwezvinhu izvi hakufungidzirwe. Zvisiri-zvazvino zvinhu zvakaiswa muzvikamu zvitatu. Zvinhu zvisingaonekwe, chivakwa, chirimwa nemidziyo uye marefu ekudyara emari.
Zvikwereti uye maAfa avo
Zvikwereti ndeimwe yematatu mahombe mahombe mairi mari dzese uye zvikwereti zvinosanganisirwa. Ndokunge, kana iyo nhumbi ikaguma ichizivisa zvese zvikwereti kukambani, chikwereti ndiko kupokana kwayo. Kazhinji izvi zvikwereti zvine hunhu hwezvino uye zvenguva yekupedzisira yekubhadhara zvisungo semhedzisiro yekushanda kwemari. Zvichienderana nemhando yeaseti, inogona kuiswa muzvimwe zvinhu zviviri, izvo zvezvikwereti zvazvino nezvisiri zvezvino.
Zvazvino Zvikwereti: Inosanganisira ese zvikwereti kana kubhadhara izvo izvo kambani inofanirwa kusangana nazvo mu nguva isingasviki gore rimwe. Ivo vanoverengerwawo mumubhadharo kune vanotengesa, vakweretesi, mitero inotorwa kubva muchiitiko.
Zvisiri-zvazvino zvikwereti: Zvese zvikwereti kana zvikwereti uye zvimwe zvisungo nazvo maturities anopfuura gore rimwe. Kazhinji mhedzisiro yekudyara nekuwedzera mashandiro kana kutanga kwebhizinesi. Kubhadhara kune vanotengesa izvo zvine kwenguva yakareba kukura kweanopfuura gore rimwe zvinogona zvakare kupinda mune ino hombe mass.
Iyo Net Kuenzana
Uyewo inonzi yako mari, Inoumbwa neguta guru rakapihwa nevadyidzani uye nenzvimbo dzakachengetedzwa idzo kambani yakwanisa kuunganidza pamusoro pemakore. Icho chinhu pane bhalanzi sheet inomiririra zvese zviwanikwa zvine kambani. Kugona kuiverenga, zvakakwana ne bvisa zvese zvikwereti kubva kunhumbi dzekambani. Mushure mekuwana mutsauko, yekupedzisira yeiyo 3 hombe midziyo iyo kambani inogona kugara, iyo yemambure kukosha, inowanikwa.
Kana iwe uchida kuenda zvakadzika mune izvo mambure akakosha, pane chinongedzo kwataichangobva kutaura nekureba uye kureba. Muchikamu chino unogona kuwana rumwe ruzivo rwekuti midziyo nezvikwereti zvinokutendera sei kuona hutano hwemari yekambani.
Balance Sheet yekutenda kune maAseti
Balance sheet ndiyo muyenzaniso wehupfumi nehupfumi mamiriro eiyo kambani yakapihwa panguva yakapihwa. Tichifunga nezve chokwadi chekuti zvinhu uye kukosha kuchachinja nekufamba kwenguva (uye nekuwedzera munguva yakareba), iyo bharanzi inoyedza kuratidza kukosha kwese kwekambani pazuva rakapihwa.
Chinangwa chayo kuronga kurongeka kweiyo nhaka nekusiyanisa maMassimonial Mass akasiyana. Iyo yakagadzirirwa kubva kuunganidzwa kweruzivo rwekuverenga nezvenguva yehupfumi. Ruzivo urwu runowanikwa mune inoenderera ichinyora magwaro, ayo ari magazini uye general ledger.
Chinangwa chinoteedzerwa nebharanzi sheet ndechekugadzira zvese izvi zviwanikwa.. Inoumbwa nezvikamu zviviri, izvo zvekudyara kana zviwanikwa, uye pakupedzisira izvo zveinonyanya kushandiswa mambure akakosha. Nekudaro, ivo vakaiswa mumapoka makuru matatu akatsanangurwa pamusoro, eayo ehupfumi, zvikwereti uye nemutengo wakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » makambani » Masasi Etsika